कसरी विन्डोज कम्प्युटर ढाँचा: चरण दर चरण ट्यूटोरियल। | ग्याजेट समाचार
कसरी कम्प्युटर ढाँचा गर्ने
ईडर एस्टेबान | | हार्डवेयर, ट्यूटोरियलहरू
एक कार्य जुन तपाइँ निश्चित रूपमा कुनै समयमा पूरा गर्नुहुनेछ कम्प्युटर ढाँचा गर्नु हो। हार्ड ड्राइवको फर्म्याट गर्नुमा यसमा भण्डार गरिएको सबै चीज मेटाउनु समावेश छ। यो एक प्रक्रिया हो जुन केहि विशिष्ट समयमा गर्न आवश्यक हुन सक्छ। तर, त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले यो कसरी गर्न सकिन्छ राम्रोसँग जान्दैनन्।
तसर्थ, तल हामी तपाईंलाई अनुसरण गर्न चरणहरू देखाउँदछौं एक विन्डोज कम्प्युटर ढाँचा। एउटा ठूलो फाइदाहरू यो हुन् कि हामीसँग यो गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यसो भए तपाईले एक भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले प्रत्येक केसमा खोजिरहनु भएको भन्दा उत्तम सूटमा।
हामीले भनेझैं यस अवस्थामा हामी ध्यान केन्द्रित गर्दछौं एक विन्डोज कम्प्युटर ढाँचा। यदि तपाई के चाहानुहुन्छ भने म्याक फर्म्याट गर्नुहोस्हामीले भर्खरै छोडेको लिंकमा, तपाईं यो देख्न सक्नुहुनेछ कि यदि तपाईंको कम्प्यूटर एप्पलबाट हो भने यो कसरी गर्ने। धेरै प्रश्नहरू भएका पहिलो प्रश्नहरू मध्ये एक यो किन गरेको यो हो। हामी यस प्रश्नको उत्तर तल दिनेछौं।
1 किन कम्प्युटर ढाँचा?
2 ब्याकअप बनाउनुहोस्
3 तपाईंको कम्प्युटर फर्म्याट गर्नुहोस्: विन्डोजमा द्रुत तरीका
4 डिस्क प्रबन्धकको प्रयोग गरेर फर्म्याट गर्नुहोस्
5 तपाईंको फाईलहरू राख्ने ढाँचा
किन कम्प्युटर ढाँचा?
कम्प्युटर फर्म्याट गर्नुको कारण किन फरक हुन सक्छ। एक तर्फ, यो केहि छ हामी मामला मा गरिएको छ त्यहाँ भएको छ उपकरणको साथ केहि गम्भीर समस्या। यस तरिकाले, यसलाई फर्म्याट गर्दा, यसमा सबै कुरा मेटिने छ र यो उही राज्यमा रहन्छ जुन हामीले यसलाई किनेका छौं। केहि चीज जसले यसलाई पुनः राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्दछ। यो गर्न सकिन्छ जब तपाईं भाइरस संक्रमित हुनुहुन्छ, जुन तपाईं हटाउन सक्नुहुन्न।
साथै यदि यो कम्प्युटर हो जुन ढिलो चलिरहेको छ भने कहिलेकाँही त्यस्ता प्रविधिमा बाजी लगाउने प्रयोगकर्ताहरू हुन्छन्। वा यदि तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर बेच्ने निर्णय गर्नु भएको छ भने, फर्म्याटिले सुनिश्चित गर्दछ यसमा कुनै डाटा वा फाईलहरू रहनेछैनन्। यसैले, जो व्यक्ति यसलाई खरीद गर्दछ तिनीहरूमा पहुँच हुने छैन।
तर यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि कम्प्युटरको ढाँचामा मानिन्छ यसमा सबै फाईलहरू मेटिने छन्। त्यसैले यो एक धेरै आक्रामक प्रक्रिया हो, र हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि यो हाम्रो मामलामा आवश्यक समाधान हो।
त्यसकारण, हामीले कम्प्युटर ढाँचा गर्न सुरु गर्नु अघि, तपाईंले ब्याकअप गर्नु पर्छ सबै फाईलहरूको। भाग्यवस, ब्याक अप गर्न सजिलो छ, र त्यो हामीले तपाईलाई पहिल्यै देखाइसकेका छौं। त्यसोभए यो गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, यदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा भएका कुनै पनि फाईलहरू हराउन चाहनुहुन्न भने।
हाम्रो विन्डोज कम्प्युटरको कन्फिगरेसनमा हामीसँग सम्भावना छ एक ब्याकअप बनाउनुहोस् एक साधारण तरिकामा, यदि तपाइँ विन्डोज १० प्रयोग गर्नुहुन्छ भने। यो तपाइँको हातैले गर्न सक्ने कुरा हो। यदि होईन भने तपाईंसँग सधैं अनलाइन प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ जसले तपाईंलाई यस प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ।
तपाईंको कम्प्युटर फर्म्याट गर्नुहोस्: विन्डोजमा द्रुत तरीका
कम्प्युटर फर्म्याट गर्न हामीसँग फरक विधिहरू छन्। एउटा तरिका, जुन एकदम छिटो भएको देखिन्छ, यो विन्डोज with को साथ पहिले नै प्रस्तुत भएको थियो। यो अझै पनि अपरेटि of प्रणालीको सबैभन्दा भर्खरको संस्करणहरूमा अवस्थित छ र हामीलाई यस प्रक्रियालाई साँच्चिकै सरल तरिकाले गर्नका लागि अनुमति दिन्छ। तपाईंको कम्प्युटरमा थप प्रोग्रामहरू स्थापना गर्न आवश्यक पर्दैन।
हामीले के गर्नुपर्दछ, एक पटक हामीले कम्प्युटरको जगेडा गरेपछि, मेरो कम्प्युटर फोल्डरमा जान्छ। यसमा, सबै हामीले स्थापना गरेका हार्ड ड्राइभहरू कम्प्युटरमा। हामीले यस समयमा फर्म्याट गर्न चाहेको कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। एक पटक अवस्थित भएपछि, माउसको दायाँ बटनको साथ क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को, तपाइँ स्क्रीनमा विकल्प को एक श्रृंखला को साथ प्रासंगिक मेनू प्राप्त। ती मध्ये एक ढाँचामा छ, जसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्दछ। हामी पछाडि ढाँचाको बारेमा डेटासहित विन्डो प्राप्त गर्नेछौं, र तल स्टार्ट बटनमा। बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र स्वरूपण प्रक्रिया सुरू हुन्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, विन्डोज कम्प्युटरलाई ढाँचा गर्ने यो तरिका एकदम सरल छ। जे होस्, यो सम्झन राम्रो छ यो प्रक्रिया ड्राइभमा बाहिर गर्न सकिदैन जहाँ अपरेटिंग प्रणाली स्थापना गरिएको छ जुन तपाईं त्यो क्षणमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंले प्रयास गर्नुभयो भने, स्क्रिनमा सन्देश देखा पर्नेछ जसले तपाईंलाई भन्दछ कि यो सम्भव छैन।
डिस्क प्रबन्धकको प्रयोग गरेर फर्म्याट गर्नुहोस्
विन्डोजमा उपलब्ध अर्को विधि, जुन धेरै उपयोगी छ यदि तपाईंसँग तपाईंको कम्प्युटरमा धेरै हार्ड ड्राइभहरू छन् भने, डिस्क प्रबन्धक प्रयोग गर्नु हो। प्रक्रिया अघिल्लो विकल्पमा जस्तै सरल छैन। त्यसकारण, यो ती प्रयोगकर्ताहरूका लागि डिजाइन गरिएको एक विधि हो जुनसँग थोरै अनुभव हुन्छ। जे होस्, एकचोटि तपाईंले यो पढ्नुहुन्छ कसरी पढ्नुहुन्छ, यो त्यस्तो जटिल हुनु हुँदैन।
डिस्क प्रबन्धक पहुँच गर्नका लागि, तपाईंले typmgmt.msc वा टाइप गर्नुपर्दछ खोज पट्टीमा डिस्क व्यवस्थापन। यो विकल्प स्क्रिनमा देखा पर्नेछ। तपाईले विकल्प छान्नु पर्छ भनिन्छ सिर्जना गर्नुहोस् र हार्ड ड्राइभ विभाजनहरू ढाँचा गर्नुहोस्। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, हामी यो मार्ग मार्फत पनि पहुँच गर्न सक्दछौं: नियन्त्रण कक्ष> प्रणाली र सुरक्षा> प्रशासनिक उपकरणहरू।
अर्को हामी जाँच गर्दछौं कि हामीले फर्म्याट गर्न चाहेको डिस्क स्क्रीनमा छ। आकारमा निर्भर गर्दै, हामी यस अवस्थामा विभाजन को एक फरक प्रकार को उपयोग गर्न जाँदैछौं। यदि यो २ TB भन्दा बढी छ भने हामीले GPT प्रयोग गर्नु पर्छ। जबकि यो रकम भन्दा कम छ भने, हामी MBR को उपयोग गर्नु पर्छ। जब हामी डिस्कमा अवस्थित हुन्छौं, भनिएको डिस्कको अनावश्यक ठाउँमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि नयाँ सरल भोल्युम भनिने विकल्प चयन गर्नुहोस्। त्यसो भए MB मा पार्टिसनको आकार र तपाईले यो नयाँ डिस्कमा दिने अक्षर छान्नुहोस्।
त्यसो भए, तपाईं डिस्क ढाँचा गर्न सक्षम हुनेछ। केवल प्रश्नको ड्राइभमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र ढाँचा विकल्प चयन गर्नुहोस्। यसले हामीलाई सम्पूर्ण डिस्क वा केवल एक विभाजन ढाँचा गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईले त्यो अवस्थामा उत्तम कुन सूट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यस विधिले हामीलाई कम्प्युटर फर्म्याट गर्न अनुमति दिन्छ, यद्यपि यस अवस्थामा हामी एकाईबाट एकाईमा जान्छौं।
तपाईंको फाईलहरू राख्ने ढाँचा
अन्त्यमा, एक विन्डोज १० कम्प्युटर ढाँचा गर्न एक तरिका, तर तपाईंको फाईलहरू राख्दै। यो अपरेटि system प्रणालीको सबैभन्दा नयाँ संस्करणमा उपस्थित एक विधि हो। उनलाई धन्यवाद, हामी के गरिरहेका छौं कम्प्युटरलाई यसको मूल अवस्थामा पुन: संग्रह गर्नुहोस्, तर हामीमा रहेका फाइलहरू हटाए बिना। त्यसैले यो विचार गर्न एक उत्तम विकल्पको रूपमा प्रस्तुत छ।
यो गर्नका लागि, हामी विन्डोज १० कन्फिगरेसन प्रविष्ट गर्छौं।त्यसपछि, हामीले अपडेट र सुरक्षा खण्ड पहुँच गर्नुपर्दछ, जुन प्राय जसो पर्दाको अन्तिममा पर्दछ। यस सेक्सन भित्र, हामी बायाँ स्तम्भमा हेर्छौं। त्यहाँ उपस्थित विकल्पहरूबाट रिकभरीमा क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को, रिसेट पीसी भनिने एक विकल्प स्क्रीनमा देखा पर्नेछ। यो एक हो कि हामीलाई यस मामला मा चासो। त्यसकारण, प्रक्रिया सुरू गर्न स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को कुरा सोध्छौं यदि हामी फाईलहरू राख्न चाहन्छौं वा हुँदैन। हामी हामीले चाहेको विकल्प छनौट गर्दछौं र प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसोभए, हामी के गरिरहेका छौं एउटा कम्प्युटर फर्म्याट गर्दैछ, तर हामीसँग भएका फाईलहरू नगईकन।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी कम्प्युटर ढाँचा गर्ने
उमर Valfre भन्यो
भिक्टर सोलिस: p नोट लिनुहोस्
उमर Valfre लाई जवाफ दिनुहोस्
अमेजनको कूजीक उत्पादनहरूमा छुटको फाइदा लिनुहोस्